Context | Reef Resilience
Dingana 2: Valio ny teboka ho an'ny ezaka ataonao
Ny dingana manaraka dia ny fanombantombanana ny loharanon-karena sy ny fananana, manazava izay resadresaka momba ny olana misy anao na ny lohahevitra, mamantatra ireo fahafaha-manao mety na ny làlan-dàlana, ary mamantatra ireo toerana ahafahanao manararaotra ireo fahafaha-manao sy manamaivana ireo fanamby. Zava-dehibe ny mijery ao anatin'ny fikambanana, ny masoivohonao, na ny vondron'ny vondrona ary ankoatra izany. Inona no asehon'ireo tany anaty sy ivelany ireo ary, zava-dehibe kokoa, ahoana ny fiantraikany eo amin'ny ezaka ataonao?
Ny asanao dia ny mahatakatra ny resadresaka amin'izao fotoana izao momba ny loha-hevitra na ny olana mba hahafahanao manapa-kevitra hoe aiza no misy ny fikambanana / orinasa / vondrona misy anao. Manana heviny ve ny miditra amin'ny resaka ankehitriny sa tokony hanomboka iray hafa? Manana fahafahana hamolavola ny fomba fijerin'ny olona ny lohahevitrao ianao.
Jereo ny famelabelarana fohy mikasika ny fanombanana ny teny manodidina ny ezaka ataonao:
Raiso ny ohatra misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBolthouse Farms, izay nanomboka resaka vaovao momba ny karaoty. Tamin'ny taona 2008, nisy vondrona tantsaha karaoty niara-niasa tamin'ny maso ivoho fanaovana dokambarotra hanamboarana ny karaoty zazakely, karaoty manaikitra bitika. Ny karaoty zazakely dia naterina indray ho sakafo vaovao tsy misy fotony. "Ny doodia volomboasary!" ary ny dokam-barotra “Mihinana azy ireo toa ny sakafo tsy misy dikany” dia niteraka resabe. Io dia namadika ny resaka avy amin'ny karaoty ho mahasalama, ho an'ny karaoty mangatsiatsiaka. Vokatr'izany dia nitombo be ny fivarotana karaoty zaza.
Ny fanovana ny resadresaka toy ity, izay antsoina koa hoe reframing, dia tsy mora. Mitaky fotoana sy vola, ary fiaraha-miasa amin'ny maro. Fa raha tsy mahita fomba hanatratrarana ny zava-kendrenao ianao mandritra ny adihevitra / resadresaka ankehitriny, dia mety ho fampiasam-bola mendrika izany.
Mba hanombanana ny toe-javatra, mila mamantatra ny zavatra lazain'ny mpihaino sy ny media momba ny fikambanana, lohahevitra, ary tanjona ianao. Izany dia hanampy anao hamaritra ny fomba hampahafantarana ny hafatrao sy ny hoe ahoana ary ny fomba hanovana ny resadresaka hanatrarana ny mpihaino anao ary hahatratra ny tanjonao. Mba hanaovana izany, dia afaka manao fikarohana na fanombanana tsy ara-dalàna ianao.
Ohatra amin'izany ny:
Manaova fanadihadiana / fanadihadiana (vakio ny lohahevitra noraketin'ny media, inona ny teny ampiasaina, inona no lohatenim-baovao, ary inona no karazana tantara lazaina, ary impiry ny sehatra no resahina)
Avereno jerena ny fikarohana efa misy (fandalinana na fandalinana efa vita)
Manaova fikarohana vaovao momba ny hevitry ny daholobe: fanadihadiana, vondrona mifantoka, fanadihadiana, ary bebe kokoa
Miresaha amin'ireo mpiara-miasa, mpiara-miasa, ary fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina
Vaovao tsara! Ny fampahalalana voangona mandritra ity dingana ity dia azo ampiasaina amin'ny fampahalalana fototra. Rehefa avy nandinika ny fiantraikanao ianao, dia azonao atao ny miverina miverina amin'ilay fikarohana voalohany ary jereo ny fomba nanovan'ny tetikasa na ny fanentanana ny tontolo iainana / fifanakalozan-kevitra / public opinion.
Ny anjaranao (> atoro anao 20 minitra)
Manaova fanandramana anatiny y manokatra fisie PDF ny fikambanana / orinasa / vondrona / orinasa sy ny fanamby. Ampiasao ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAndinin-tsoratra Contextmanokatra fisie PDF mba hahazoana ny valin'ny fivoaran'ny atidoha. Ny lisitra tsotra iray dia ampy.
Mametraka fanontaniana amin'ny scan intern:
Moa ve ny mpikambana ao amin'ny vondrona / fikambanana misy anao / fikambanana mifanaraka amin'ny tanjony sy ny tanjony?
Inona avy ireo loharanon-tsoa izay azon'ny vondrona misy anao, ohatra, olona, ​​teti-bola, laza, fifandraisana / fiaraha-miasa, sns ...?
Inona moa ianao / ekipanao / mpiara-miasa tsara sy tsy tsara?
Manana fifandraisana amin'ny media ve ianao na ireo mpiara-miasa aminao?
Misy tetikasa hafa na ezaka amin'ny fifandraisana amin'ny olana mitovy?
Karazana teti-bola, mpiasa, fotoana, ary fanohanana amin'ny fitantanana inona no azonao andrasana?
Manana mpiara-miasa (na mpanohitra) ve ny vondrona misy anao? Iza moa izy ireo ary inona ny fahafahany sy fahavononana handray anjara? Raha manana mpiara-miasa / mpiara-miasa ianao, inona no lazain'izy ireo, izany hoe tsara / ratsy?
Inona ny olana atrehin'ny vondrona misy anao ao amin'ny vondrom-piarahamoninao? Misy sosokevitra sosialy na politika afaka manintona ny saina na ny tetibola lavitra ny tanjonao?
Ity manaraka ity ny fanadihadiana avy any ivelany mba hamaritana ny zava-mitranga ivelan'ny fikambanana / sampana / vondrona misy anao. Ireo vokatra ivelany ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanananareo, ny fanamby, ary ny paikady mba hanomezana izany fiahiana izany.
Mametraka fanontaniana ho an'ny fanandramana avy any ivelany:
Inona avy ireo olana atrehina eo amin'ny fiaraha-monina, fanjakana, nosy ary media? Raha ny tena izy, inona no mety hitranga eo amin'ny tetikasanao?
Iza avy ireo manam-pahaizana izay tokony hifandray amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba ilay olana?
Misy mpanohana na mpanohitra mavitrika ve ny lohahevitra / olana misy anao?
Moa ve ny vondrona, ny fikambanana, na ny lohahevitra be mpahalala sy / na resahina? Raha izany, inona no lazain'ny olona?
Misy diso ve sa diso hevitra momba ny olana misy anao?
Feo inona no re? Moa ve izy ireo manohana ny lohahevitrao?
Aiza no misy anao eo amin'ny sehatra politika, ohatra fifidianana, fivoriana ara-dalàna? Mora kokoa ve ny tontolon'ny politika?
Misy politika na lalàna mety hisy fiantraikany amin'ny tetikadinao ve?
Inona no mety hitranga mety hitranga amin'ny tetikasanao - na hisarika tsara ny saina na tsy hiresaka? (Misy fisehoan-javatra hafahafa toy ny Olympika na trangan-drivotra mahery vaika izay manome fahafahana anao hanangana olana izay tsy mety hohajaina aloha?)
Ity tatitra ity dia mifototra amin'ny tetikasam-pampitam-baomieran'ny Smart Chart® Strategy Spitfire Strategy. Ny Smart Chart dia mari-pamantarana voasoratra ao amin'ny Strategy Spitfire. Raha te hianatra bebe kokoa, tsidiho: misokatra amin'ny varavarankely vaovaospitfirestrategies.com.
Mandehana any amin'ny Dingana 3: Fantaro ny tanjon'ireo mpanatrika (s)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampandrenesana fananganana seraseramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFantaro ny Activation Point® manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSmart Chart® - fitaovana ifanakalozana hitarika ny safidinao amin'ny fifandraisana mahay